China Slag mpanamboatra milina mitsangana sy mpamatsy | BBMG
Ny tany mikitroka amin'ny alàlan'ny famolavolana fikosoham-bary amin'ny kapila fikosoham-bary dia misy ampahany roa: ampahany kely amin'ny slag vaovao misy atiny ambony amin'ny rano ary ny ankamaroan'ny sombin-tany tsy vita vita miaraka amin'ny atin'ny rano ambany. Ity ampahany amin'ny slag mbola tsy vita ity dia ny fitaovana marokoroko niverina taorian'ny fisarahan'ny mpampisaraka noho ny poti lehibe kokoa. Ny rivotra mahery tsindry mahery dia nahatonga ny ampahany roa tamin'ny sombintsombina nianjera teo amin'ilay kapila fitotoana.
Eo ambanin'ny hetsiky ny hery afovoany, ny slag dia tarihina mankany amin'ny roller coule auxiliary, ary ampidirina amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fitsofana ny roller coule auxiliary. Ny roller coule auxiliary dia mitazona elanelana kely amin'ny fikosohan-tsolika, ary miorina amin'ny sandry rocker mavesatra maivana tokoa.
Ny familiana fikosoham-bolo lehibe dia miorina amin'ny sandry rocker lehibe matevina kokoa, ary ny sosona fitaovana voarindra dia alàlan'ny fitotoan'ny tsindry. Ny hery dia vokarin'ny lanjan'ilay fikosoham-bary ary ny tsindry amin'ny rafitra hydraulic.
Mihodina ny fikosoham-bary amin'ny fikosehana ny fandriana mahamay. Ny fitaovana fetran'ny sensor sy buffer napetraka amin'ny sandry rocker dia afaka misoroka ny fifandraisan'ny vy mivantana eo anelanelan'ny roller fitotoana sy ny kapila fikosoham-bary.
Ny poti-poti-tany dia atsipin'ny herin'ny centrifugal ary mikoriana amin'ny peratra mitazona. Eto dia azon'ny fikorianan'ny rivotra miakatra amin'ny alàlan'ny tadin'ny rivotra izy, ary ny vovoka sy gazy dia mikoriana ao amin'ny efitranon'ny fikosoham-bary, ka voahodidin'ny varingarina fitotoana mitsangana miaraka amina akanjo tsy mahazaka ary miditra ao amin'ny mpampisaraka vovoka. Ny mpampisaraka vovoka dia apetraka na ampidirina amin'ny barika fitotoana mitsangana.
Raha tsy misy ny fanampian'ny fandefasana vondrona fanampiny, ny milina mitsangana dia azo alefa mivantana ary atombok'ilay motera lehibe eo ambanin'ny toetran'ny famoahana (aorian'ny fanidiana fohy). Mba hamoahana ny motera lehibe, ny roller manodina dia atsangana hidraulika mba hampihenana ny tsindry amin'ny rafitra hydraulic. Ny menaka dia azo ampidirina ao amin'ny lavaka tsy misy vy an'ny varingarina hydraulic.
Previous: Rolling roller
Manaraka: Vary atsangana arina